Ndi Ozo, Buru Nanị | Martech Zone
All Bụ Otu, Naanị Iche
Wednesday, December 18, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị na-anụ ya oge niile, “Anyị dị iche”. Anyị na-anụkarị site na ndị na-ere ahịa, "You'renụ niile bụ otu".
N'abalị ikpeazụ m nwere obi ụtọ ịnọ na a Smartups ogwe ahia na Jeb Pụrụ Iche, Gail McDaniel, Brian Phillips, na George churu.
Ọ bụ nnukwu panel… niile anyị kwuru okwu ma anyị niile nwere netwọkụ dị iche na ndị ahịa. Jeb nwere kediegwu ụlọ ọrụ dabere na ọrụ ya na ndị ahịa hụrụ ya n'anya, Gail na-agba ọsọ mba, onye na-emepụta akụkụ ahụ ike dị elu, Brian na-eduga n'ụwa niile animation na mmepe shop, na George nwere premiere ngwaahịa branding gị n'ụlọnga. Largefọdụ buru ibu, ụfọdụ dị obere, ụfọdụ kwadoro, ụfọdụ ọhụrụ… na-eme mkparịta ụka (na obere ngosipụta nke arụmụka) mmeghe anya.
Dị ka anyị na-abanye 2014, e nwere ụfọdụ nwere oke were-aways na m kwere mmetụta ọ bụla ahịa ndú - ma ị na-na ihe gị n'ụlọnga, a mmalite, ma ọ bụ a nnukwu nzukọ:
Inbound marketing, mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, na ọbụna ịzụ ahịa ọdịnaya abụghị ihe niile, njedebe niile nke ahịa. Enwere enweghị otu azịza gaa na nke na-egosipụta ozi gị, ebe ekwesiri ịnụ ozi gị, yana otu a ga-esi anụ ya. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ka na-adabere na ndị ahịa siri ike na akwụkwọ ahịa ngwaahịa ngwaahịa. Ndị ọzọ na-eme nke ọma na nnukwu mbọn na nkwalite.
Ijikọ atụmanya ahụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ site na nnukwu akụkọ agbanwebeghị. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emepe usoro mgbasa ozi ọdịnala, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emepe mkpụmkpụ mkpirisi maka mkparịta ụka n'ịntanetị… ịgbasa akụkọ na-ejikọ mmetụta uche na ndị na-ege gị ntị bụ otu ihe ahụ ugbu a dịka ọ dị kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ndị ahịa na azụmaahịa na-achọ ịzụrụ ihe ọzọ bụ nyocha na ntanetị na ịchọta ozi ha chọrọ na netwọk mmekọrịta ha na site na ọdịnaya ekesara. Nwere ike ịgba ọsọ, mana ị nweghị ike zoo… ụlọ ọrụ ndị na-anaghị eme ihe n'eziokwu ga-ahụ mmetụta nke emeghị ihe n'eziokwu ha. Ikekwe ọ bụghị taa, kama otu ụbọchị.
Ka m na-ala, ihe batara m bụ na ọrụ niile anyị na-eme dịka ndị na-ere ahịa bụ otu ihe - mana ndị na-ege ntị na ụzọ anyị na-aga ebe ahụ dị iche. Jeb nwere ike inyere aka ịzụlite obodo nke na-eme ka akụkọ ahụ gaa ahịa, George nwere ike ịzụlite ya n'ozuzu ika na ngwaọrụ ịkọ akụkọ, Gail nwere ike ịmepụta ngwaahịa ahụ akwụkwọ na nkesa ịkọ akụkọ ahụ, Brian ga-atụgharị na n'ụzọ nkịtị maa atụ akụkọ.
Onye ọ bụla nke anyị Filiks nwere dị iche iche ndị mmadụ, oge ụlọ, na ego… ma anyị niile na-elekwasị anya na-measurable azụmahịa nsonaazụ anyị ahịa. Ọ bụghị anya anya! Nnweta, njigide na ịchụpụ ndị ahịa bụ etu ndị ahịa siri ike na-atụle ọganiihu ha.
Tiger Pistol: Azụmaahịa Ntanetị nke Facebook
Igwe ojii FME: Nchịkọta data na mgbanwe nke iPaaS